एन्फाको भ्रष्टाचार विवाद : अख्तियार तमासे ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
एन्फाको भ्रष्टाचार विवाद : अख्तियार तमासे ?
प्रकाशित मिति ७ माघ २०७५, सोमबार १५:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने खेल हो भन्ने नजिर पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाले गराइदिएका छन् । उनी भ्रष्टाचारी भएको दोषमा विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले १० वर्ष फुटबलका गतिविधिबाट टाढा रहने गरी कार्वाहीमा परेका राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान पनि हुन् । उनले ५८ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित तत्कालीन एन्फा उपाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले फिफादेखि एसियाली फुटबल महासंघ अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी दिएका थिए ।
नेपालको कुनै पनि निकायले उनलाई दोषी ठह¥याएन । तर, फिफाले कार्वाही ग¥यो । फिफाको कार्वाही पछि नेपालमा पनि तिनै प्रमाण हेरेर कार्वाही हुन सक्दथ्यो । तर अख्तियारले गरेन । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीसंग गणेश थापाको पारिवारिक नाता थियो ।
कार्कीले थापाको मुद्दा तामेलीमा राखे । त्यसबाहेक केही गरेनन् । अख्तियारले भन्यो प्रमाण पुगेन । सम्पत्ति शुद्धीकरणले त केही पनि गरेन । लेखा समितिमा मुद्दालाई बलियो रुपले प्रस्तुत गरेका तत्कालीन सांसद रामहरि खतिवडालाई गणेश थापाले धेरै पटक थर्काए । विभिन्न ठाउँमा लछारपछार पनि गरे ।
तिनै थापाले अहिले पनि हुर्मत लिइरहेका छन् । उनकै इशारामा चार जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्षहरूले वर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई कार्वाही गर्न माग गर्दै फिफा र एएफसीमा निवेदनमात्र हालेका छैनन् अख्तियार गुहारेका छन् ।
गएको वैशाखमा भएको निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल भएको आरोपसहित उनीहरूले फिफादेखि अख्तियार गुहारेका हुन् । फिफाले पनि चासो देखाएको छ भने अख्तियारले छानबिन सुरु गरिसकेको बताएको छ ।
काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र धादिङ जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्षहरूले अखिल एन्फामा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी दिएकामा अख्तियारले छानबिन थालेको आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी मदन कोइरालाले बताएका छन् । उनीहरूले २०७५ पुस १७ गते अख्तियारमा निवेदन दिएका थिए ।
अख्तियारको दोहोरो भूमिका
अख्तियारले यतिबेला दोहोरो भूमिका खेलिरहेको आरोप छ । एकातिर कर्मा छिरिङ शेर्पा नेतृत्वको कार्यसमितिमाथि छानबिन थालेको छ । अर्कातिर गणेश थापाको तामेली फाइल फेरि खोलेको छ ।
गणेश थापाको अनियमितता तामेलीमा रहेकाले अख्तियारले नयाँ टिम आएपछि पुनः खोलेको हो । नयाँ कुनै सुराक पाएर खोलियो वा कसैको उक्साहटमा खोलियो त्यो भने अख्तियारले बताउने कुरा नै भएन ।
अख्तियारले गणेश थापाका नातेदारहरूसंग बयान लिइसकेको छ । थापा निकटका एक फुटबलकर्मीले भने, ‘केही भए पो कार्वाही हुन्छ, केही गरेकै छैन के कार्वाही हुन्छ ?’ अर्थात् उनको भनाइमा गणेश थापालाई नेपालमा कार्वाही हुन्न । विदेशमा त उनलाई छोडिएन ।
साँघुका अनुसार अख्तियारमा थुप्रै निवेदनहरू पेन्डिङमा छन् । त्यसो हुँदाहुँदै अख्तियारले यो मुद्दाका पछाडि कुँद्नुमा कसैको स्वार्थ रहेको हुन सक्ने आशंका बढेको पनि बताउन थालिएको छ । त्यस्तै भएको छ गणेश थापाको मुद्दा पनि ।
अहिले गणेश थापा र कर्माछिरिङ शेर्पाका मान्छेहरूलाई हातमा लिएर दुवैसंग खेल्ने काम भइरहेको स्रोत बताउँछ । थापाले शेर्पासंग खेल्न खोज्दा एन्फाका मानार्थ अध्यक्ष टासी घलेले हात धुन पुगेका छन् । शेर्पा नेतृत्वको एन्फाले पदीय गरिमा जोगाउन नसकेको आरोपमा मानार्थको पदवी फिर्ता लिएको बतायो । अर्थात् टासी बर्खास्तीमा परे ।
स्रोतका अनुसार घले गणेश थापाको डिजाइन अनुसार चल्दै आएका थिए । अति भएपछि निकाल्नु परेको एन्फाले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पनि ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एन्फामा झुकाव पहिलेदेखि नै हो । थापाविरुद्ध मुद्दा चलिरहँदा ओलीले भने ढुक्कसंग एन्फाका कार्यक्रममा भाग लिइरहन्थे । एमालेका अध्यक्षका रुपमा उनी एन्फामा निकै पुगे ।
अहिले एन्फामा थापाका विरोधी कर्माले सम्हालिरहेका छन् । पुरानो नाताले पनि ओलीले थापालाई मनमा राख्न खोजेका होलान् । थापाको लहलहैमा लागेर कतै नेपाली फुटबल इतिहासको पहिलो पूर्ण कार्यसमिति चयनका अध्यक्ष कर्माप्रति अनुदार हुन खोजेका त हैनन् ?
ओलीले जस्तोसुकै निर्देशन दिए पनि कतै नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसको कार्यकर्ता छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढेका त पक्कै हैनन् होला । शेर्पा नेतृत्वको कार्यसमितिमा नेकपा र अन्य दलका कार्यकर्ता एवं शुभेच्छुक पनि छन् ।
कसैले सुनाए होला एन्फाको नेतृत्व काँग्रेसको भागमा गएको छ । त्यही सोचेर ओलीले छानबिनको दायरामा एन्फालाई राखेका त हैनन् होला । यदि हो भने त्यो सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य । भ्रष्टाचार गर्ने छुट कसैलाई छैन ।
आफ्नो जन्मदिने आमालाई माया गर्नेहरुले हेर्नैपर्ने भिडियो
काठमाडौं । नेपालीमा एउटा भनाई छ आमा बुवाको मन छोरा छोरी माथि तर छोरा छोरीको मन ढुंगामाथि ! पछिल्लो…
करोडौं कर नतिर्ने स्कुलले कति लुट्छन विद्यार्थीसँग ?
ललितपुर । ललितपुरका नाम चलेका र महँगा स्कुलले नै राज्यलाई कर तिर्न आनाकानी गरेका छन् । ललितपुर महानगरको रेकर्डमा हात्तिवनस्थित…
प्रधानमन्त्री चढेको विमान होल्ड प्रकरण: एटीसीको कान जाँच्न निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली चढेको विमान होल्डमा राखिएको विषयमा अध्ययन गर्न बनाइएको छानबिन समितिले काठमाडौं विमानस्थलमा रहेका एयर…
काठमाडाैं । भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी)ले सूर्योदय नागरपालिका–२ मानेभञ्जयाङका वाङदेन भोटेले बनाउँदै गरेको घर केही दिनअघि बनाउन रोक्यो ।
गुप्तचर प्रमुख बन्न कार्कीको यस्तो खेल
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्न असफल भएका डीआईजी पुस्कर कार्की यतिखेर नयाँ खेलमा लागेको खुलासा भएको छ…
पोष्टमार्टम रिपोर्ट भन्छ -निशान खड्काको अपहरण लगत्तै घाँटी थिचेर हत्या
काठमाडौं । अपहरण गरेर हत्या गरिएका बालक निशान खड्काको पोष्टमार्टम रिपोर्टले उनलाई अपहरण गरेकै दिन राति घाँटी थिचेर…
यसरी गरिन्छ पोर्न फिल्मको शुटिङ 11 views
केटा मान्छेले सेक्स सम्बन्धको बेलामा गर्ने ५ गल्ति 10 views